Ndivanaani isu - Sichuan Wenyu Electric Co., Ltd.
NDIANI WEIYU Magetsi?
Weiyu Electric, iri chikamu chevaridzi vekambani yakanyorwa (Stock Code: 300820) -Sichuan Injet Electric Co, Ltd. Ine vashandi vanopfuura mazana mashanu, musangano we2000 ㎡ usiri guruva, zvitupa zve169 patent, ruzivo rwemakore makumi maviri nemana mumagetsi. indasitiri yemagetsi, Injet yakagamuchira kurumbidzwa kwakakwirira kubva kumabhizinesi epasirese ane mukurumbira ezvigadzirwa zvepamusoro uye sevhisi seABB, Nokia, Schneider, GE, GT, SGG uye nezvimwe.
Isu tinofarira zvisikwa uye dambudziko, rakazvipira kuzadzisa vimbiso yedu kumutengi wega wega mune yega chirongwa. Isu tinosimbisa kubatana pamwe neyunivhesiti uye yekutsvagisa Institute, uye kuzvipira kunatsiridza mutengi ruzivo uye tekinoroji utsanzi. Hapana chinogona kutimisa kuita kuti zvisikwa zvive nyore uye zviite.
Yakavambwa mu2016, WEIYU ndeye "ZVIMWE" (Magetsi Mota Yekutengesa Zvishandiso) mhando yeSichuan Weiyu Electric Co, Ltd. yakatsaurira hunyanzvi, mhando, uye kuvimbika muminda yesimba indasitiri. Nekuenderera mberi nesimba rehunyanzvi R&D uye Sales & Service Team, Weiyu Electric yatove kugona kugadzira mhando dzese dzeEV kuchaja zviteshi uye nekupa vatengi mhinduro yakazara yekuchaja. OEM & ODM kana rubatsiro rweinjiniya kunowanikwa zvakare.
Nei tichisarudza US?
Munguva yekugadzira uye kugadzira kwezuva nezuva, maitiro ese anoenderana neiyo ISO 9001 Simbiso Sisitimu.
Yedu yakakosha yezvinhu inogadzirwa kune amai vedu kambani -Injet Electric, iyo ine 22000 ㎡ isina-guruva workshop, Maitiro ese ane mwero wepamusoro-soro kuona mhando yechigadzirwa. Magetsi zvinhu zvinofanirwa kuchengetwa mune inogara-hunyoro imba yekuchengetera. Yese bhodhi redunhu ichave yakapendwa kuve hunyoro-chiratidzo, anti-guruva, munyu-namata-proof, uye anti-static.
Iyo software chikamu chine redunhu bhodhi, inodzora system uye inodzora. Izvi zvikamu zvitatu zvine maitiro azvo akasarudzika ekuburitsa, ayo anofanirwa kuteverwa kuverengera kuzara kuzere nezvakakodzera dhizaini.
Yese software uye Hardware inogona kuteverwa uye kuteedzerwa neiyo serial nhamba, iyo zuva rekutakura, bvunzo rekodhi, zvinhu zvekukumbira marekodhi, mbishi zvinhu bvunzo rekodhi uye mbishi zvinhu zvekutenga rekodhi. Zvese zvatiri kuita kuve nechokwadi chehunhu kugutsa vatengi vedu 'zvido.
Kuzvimirira R & D
Tine zvikwata zvehunyanzvi zveR & D zvine simba rekuvandudza kugona. 51 dhizaini patent yatove kushandiswa, uye iyo nhamba iri kuramba ichikura.
Kuchaja Zviteshi Ev, Magetsi Motaja, Ev Charge Chiteshi, Magetsi Motaja Dzine Rudzi rwechipiri Plug, Ev Charge Zviteshi, Kubhadharisa Chiteshi Ev,